Iindaba - Intsimbi ekrwada Ixabiso liqhubeke nokunyuka.
Steel nothango lwaso lobhedu
Zu nothango lwaso lobhedu
358 Ucingo lokubiwa kobundlobongela
Iron wire Kucingo olubiyele
Ixabiso leMpahla eNsimbi ngexabiso eliphantsi.
Ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka, izinto ezinje ngomthi, isiponji, izinto zokwaleka ngemichiza, isinyithi esingenantsimbi, kwaneebhokisi zonyuka, kwaye amaxabiso ezinye iindidi ade aphindeka kabini. Umzekelo, isinyithi esingenantsimbi sikhuphuke malunga neepesenti ezingama-50, kwaye igwebu le-poly-ether ethambileyo, into ebalulekileyo ekrwada yesiponji, inyuke nge-126.74% kwiinyanga ezine ezidlulileyo.
Kwi-Focus, ixabiso lezinto eziluhlaza liye lagcinwa ukusukela ngoJan, ngo-2021. Kule mihla, emva koMnyhadala weNtwasahlobo, isekwindlela yokukhula.
Izinto eziphambili zinjengeentsimbi:
● Iziphumo zentsimbi ngo-2020 zisezantsi kuneziphumo zango-2019
● Icandelo loMphathiswa Wezendalo neNdalo: Ukukhuthaza ngenkuthalo i-iron kunye nentsimbi, amalahle kunye namanye amashishini ukusombulula umthamo ongaphezulu
● Imakethi yemfuno zeshishini loomatshini iya kuqhubeka ukubuyela kwimeko yesiqhelo, kwaye imeko yokusebenza kulindeleke ukuba iqhubeke ukuphucula.
Uhlalutyo lukholelwa ekubeni ukonyuka kwamaxabiso ekrwada izinto kwelinye icala kuchatshazelwe sisifo esitsha sesifo isithsaba somoya, kwaye kwelinye icala kulindelwe ukubuyiswa kohlaziyo lwezoqoqosho kwihlabathi liphela emva kokuba isitofu sokugonya esitsha sithweswe kwixesha elizayo. Ukuphendula ukunyuka kwamaxabiso ekrwada, izixhobo zasekhaya kunye nezinye iinkampani zibhengeze ukonyuka kwamaxabiso.
Imakethi yentsimbi ingenise uhlengahlengiso olunamanqanaba. Siqikelela ukuba imbonakalo yentengiso isaza kuba nomfutho ophezulu kwaye iya kuhlengahlengiswa kancinci kwixa elizayo, ilinde ukuba ibango lokwenyani liqale.
Iimali ezikhuselekileyo zokugcina izinto zokwenza izinto kunye nokuthelekelela kwintengiso kwikamva zizizathu zokunyuka kwamaxabiso entengiso. Lo mkhwa uya kuqhubeka ubuncinci iminyaka emibini, kwaye uxinzelelo lwexabiso leRMB lonyuka. Uqoqosho lwehlabathi alubuyanga kwimeko yemeko yokudinwa kuqoqosho lokwenyani.
Zu ikhathalogu imveliso nothango lwaso lobhedu
Yintoni ekufuneka ndiyenzile emva kokuba ndigqityiwe ...
Steel nothango, zu nothango, welding Iron F ...
UWhatsapp / Wechat: 008615530184730
Idilesi: A1608 Chuangxin Building, 315 Changjiang Avenue, High-zobugcisa Zone, Shijiazhuang, kwiPhondo Hebei. China